UMat Szulik ubonakalisa i-3D yakhe esezantsi kwiprojekthi yePolyWood | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umsebenzi omhle kaMat Szulik ophantsi kwiprojekthi yePolyWood
I-poly ephantsi yi I-polygon-based 3D style mesh ephawulwa ngokusetyenziswa kwenani eliphantsi leepoligoni. Isitayile esifanelekileyo semidlalo yevidiyo kwaye ngakumbi ezo zijolise kwiselfowuni, apho kusetyenziswa kancinci izixhobo, ifuthe elincinci kubomi bebhetri lefowuni enje nge-smartphone.
Ixesha eliphantsi libhekisa kokubini ngengqondo yobuchwephesha kunye nengcaciso jonga ukusebenza kwaye unike nembonakalo ebonakalayo kulunge kakhulu ukuba uyakwazi ukusebenzisa imigaqo-nkqubo yakho kakuhle. Umzobi obabonisa kwiprojekthi yakhe yePolyWood nguMat Szulik, othe ngexesha lakhe elithe kratya wasebenza kuyo ukuyizisa kwi-Behance yakhe.
Iipolgoni zinokuba nalo naliphi na inani lobuso, kodwa zihlala zahlulwe zangunxantathu. Ngokubanzi, oonxantathu abangakumbi banesingxobo, Ngokucacileyo into iya kubaKodwa ukuba siyijonga ngokwembono yehardware ekufuneka ihambile okanye inikezele nge-polygon, imiphetho embalwa inayo, umsebenzi omncinci we-CPU ebonisiweyo ukuyiphinda.
Ngena apha Umahluko phakathi komculi olungileyo ophantsi we-poly kwaye enye ayinjalo. Kwaye into enokuba lula ukuyenza ekuqaleni inobunzima bayo. USzulik ufuna kwiprojekthi yakhe yePolyWood umbono wakhe kuyilo lweemveliso ezilungele iithoyi, kwaye ekugqibeleni uye wawenza kulo msebenzi uxabisekileyo kunye nezilwanyana ezininzi njengabadlali abaphambili.
Umsebenzi kwi-3D enika ngokugqibeleleyo imvakalelo ye krolwa ngesandla Inani ngalinye elinikezelweyo.
Nasiphi na isilwanyana esiyilayo, njengexhama, impungutye okanye indlulamthi, bonisa u-a ulwazi oluphezulu malunga nale ndlela ye-poly ephantsi.
Njengoko ndihlala ndithanda ukwenza njalo, ndiyakushiya yakho Behance ukuze ukwazi landela umsebenzi wegcisa le-3D othe ngexesha lakhe lasimahla walinikezela ukwenza lo msebenzi umhle kangaka
Unga ngena kulomnyango ukufaka isicelo se ukusebenza poly poly kwiAdobe Photoshop.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Umsebenzi omhle kaMat Szulik ophantsi kwiprojekthi yePolyWood
Tilen Ti ezimangalisayo zezilwanyana zamanzi